inkqubo station umbane Telecom - China Renergy Equipment Co., Ltd
RW-5KW pitch bume
LED ukukhanya yelanga street
LED ukukhanya landscape yelanga
LED ukukhanya Ezisongwayo yelanga
LED ukukhanya nokwe
Wind ezisebenzisa elanga ukukhanya street
5kw on-grid system elanga
5kw off-grid system elanga
10kw on-grid system elanga
10kw off-grid system elanga
inkqubo yonikezelo amandla station Telecom
inkqubo yokuhamba Micro
Off-grid unikezelo amandla omoya
Off-grid solar umoya nedizili
Telecom station supply amandla
Umoya solar hybrid igridi
injini zomoya nabancinane isicombululo ogqibeleleyo kwicandelo ngomnxeba.
efakwe izitishi Telecom intabalala ehlabathini lonke ukuqinisekisa ukuba izibonelelo unxibelelwano olwaneleyo. Ezininzi kwindawo ekude, iimfuno zamandla ukuba ezi zikhululo zidla ezibonelelwayo ezisebenzisa umbane idizili abangenabubele ngokokusingqongileyo, izinto ezo imali eninzi kuphela ukusebenza kodwa nokwanda obuqhubekekayo amafutha efosili, ukusetyenziswa umbane diesel kungekudala abe bangazinzi.
injini zomoya Renergy kunye neemfuno zeenkonzo kunye nolondolozo ephantsi ukufakela kwiindawo ezikude yaye kunzima kwinkonzo nomtsalane ngakumbi.
Yesicelo: Kukunikezela, umthombo ethembekileyo amandla iindleko-olusebenzayo kunye nesandi nokusingqongileyo China mobile isikhululo Telecom kwindawo ekude.
Ukususela ngonyaka ka-2008, Renergy inxaxheba ekuyilweni kumthombo mbane oluthembakeleyo yezikhululo Telecom kwindawo esemaphandleni ukwenzela China mobile. Uninzi iisayithi ezintsha okanye iziza ukuhlaziywa zakhiwa iintaba neenduli, kwakuyimfuneko ukuba ukwakha womnatha kunye nokugcinwa kufuneka wenziwe ngawo onke amaxesha konyaka ngelixa nokunciphisa iziza
Izixhobo ephambili kwinkqubo yonikezelo lwamandla yeyona Turbine Renergy Wind. Isetyenziswa njengento ephambili kwiinkqubo amandla ekude kwindawo esemaphandleni. Ngenxa yoko, le injini lubonise ngaphezu iminyaka emininzi kwi ukuzibaxa izinto ezinzima kakhulu yemozulu ukuba mbi kumntla ntshona China. indawo Northwest ngummandla kunomoya; inkoliso iifama zomoya MW izinze khona. zemimoya enamandla kakhulu umoya kunokwenzeka ngalo naliphi na ixesha lonyaka, ingakumbi ngexesha lasebusika, yaye le nto yenziwa mbi ngenxa kwiindawo ephakame kwaye kalula esiphezulu apho izikhululo zothungelwano zaziza kwakhiwa. Kwakubalulekile ukuba nasiphi na isixhobo esifakelwe kwezi ndawo yaba ixesha elide kwaye zithembeke xa efuna ukulungiswa ubuncinane.
Le nkqubo iye yaba zokusebenza ukusukela ngo-2009 kunye nenkqubo amandla kumaziko sokuhlohla iqhube kakuhle kakhulu. Renergy efakiweyo amakhulu nkqubo for China mobile. Ke kaloku emveni koko, Renergy waqalisa ukubonelela inkqubo enjalo China Union, China Telecom.
Ukuza kuthi ga ngoku, Renergy uye walungiselela amakhulu nkqubo kubathengi Telecom eRashiya, Tajikistan ne Iran.
umoya ephendulwa kunye panel elanga umbane, agibiseleke iqela battery DC48 nge 48V umoya isilawuli gqith elanga, amandla kweenkonzo imithwalo Telecom.
Diesel generator ingasetyenziswa nofumaniso backup amandla. System na ubungakanani ukunika AC amandla ngokusebenzisa inverter igridi off, kwaye iyafumaneka ukudibanisa igridi ngokusebenzisa kwi inverter kwigridi.
RW-5kW pitch bume, DC200V
8m, inqaba monopole
panel Solar kunye isibiyeli
1. Multiple uqhagamshelo panel solar
2. Multiple uqhagamshelo umoya ephendulwa
3. Diesel generator pele
4. umsebenzi MPPT Solar
5. Wind umsebenzi turbine MPPT
ulawulo output ombane 6. amandla elanga
ulawulo output amandla ombane 7. Wind
8. Ibhetri Digital inkqubo yolawulo amandla
9. Inkqubo yolawulo umthwalo Intelligent
10. System fault kuhlola kunye nenkqubo yokuhlola
inkqubo yokuhanjiswa 11. Wireless
ulawulo ephendulwa ukubaleka 12. Umoya.
station Telecom, isikhululo umqondiso, kwisiseko sesikhululo GSM njalo njalo.
Telecom case station isifundo
ixesha Post: Apr-19-2018